(Super Easy) Etu aga-esi enweta ekwentị na ekwentị anaghị agbanye
Ekwentị na-agba? Kedu ka esi chekwaa foto nke ekwentị a were. Gụọ edemede a ma mụta otu esi enweta ekwentị na ekwentị anaghị agbanye.
(New Released) Otu esi enweta ekwentị site na ekwentị na-anaghị agbanye
Ana m eji ekwentị ekwentị Samsung, ọ meela agadi ugbu a, mana ọ ka na-arụ ọrụ dịkwa mma. Achọghị m iji kwalite sistemụ ahụ gaa na ụdị dị elu maka na ngwaike ya adaghị adaba maka sistemu kachasị ọhụrụ. Maka nke ahụ, ekwentị m mgbe ụfọdụ na-agbawa agbawa, ọ naghị abụkarị oge, mana enwere ike ime otu oge n'ime ọtụtụ ọnwa. Ọ bụ ihe na-akpasu iwe mgbe ihe ọghọm mere, mgbe ụfọdụ ọ na-arapara n’etiti imepe APP; n'oge ndị ọzọ, ọ na-achaji ọchịchịrị. Maka ọtụtụ n'ime ọnọdụ, ọ na-agbakeghachi mgbe a na-etinye ya, mana enwere otu mgbe m na-enweghị ike ịkpọte ya ọbụlagodi mgbe ọ na-achaji ọkụ. Data nke m na - enweghị ike ida bụ foto, enwere m data ndị ọzọ niile akwadoro, mana ọbụghị foto nke m were ọtụtụ ụbọchị gara aga.
Otu esi ewepu ese foto n’ekwentị nke na agbanyeghi aburu m nnukwu nsogbu. Nnukwu ekele na-aga enyi m onye webatara m Broken gam akporo ekwentị data. O zoputara foto m nke ọma n'ime otutu nkeji.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ iPhone, biko nwaa iOS Data Iweghachite. Ma ọ bụ ịnwale esi edozi mmezi sistemụ iOS idozi nsogbu. N'ikpeazụ, ịnwere ike ịgbalị iwepu foto na-agaghị agbanye na ndabere dị ka n'okpuru:
Naghachi foto site na iphone nwuru
Etu esi eweghachite Foto site na iCloud ndabere
Etu esi eweputa onyonyo iPhone site na iTunes ndabere
Budata iOS Data Recovery / Broken gam akporo Data ndọtị free ugbu a!
IOSzụta iOS Data Iweghachite / Emegharia data Android ugbu a!
Naghachi Ndepụta Oku ehichapụ, Foto, WhatsApp, SMS, Kọntaktị na ndị ọzọ site na iPhone ma ọ bụ ekwentị ekwentị.
Emere Mgbatị Akpọrọ gam akporo
DataKit Broken gam akporo Data Ezubere nke ọma iji weghachite data gị, gụnyere data kọntaktị, ozi, oku akụkọ, ụdị data mgbasa ozi, dịka gallery, ọba akwụkwọ, egwu, vidiyo, wdg. Aga m egosi gị otu esi ewepu ese foto n’ekwentị na-agaghị agbanwu ma ọ bụ tijie.
O nwere nnuku enyi di omimi, nke mmadu nwere ike itinye ngwa a n’iile.
Ka m kesaa gị nkuzi nkuzi site na nzọụkwụ:
nzọụkwụ 1 Ibudata ma wụnye DataKit Broken Android Data na kọmputa gị.
nzọụkwụ 2 Mgbe ị na-etinye ngwa n’ime kọmputa gị, biko hota Broken gam akporo ekwentị data na ihuenyo, nke ị ga-ahụ ihuenyo dị ka n’okpuru. Biko họrọ nke ziri ezi dịka mkpa gị si dị, ma aka ekpe ma ọ bụ aka nri. Pịa Malite Bọtịnụ na APP ga-amalite na-agba ọsọ na-akpaghị aka.
nzọụkwụ 3 Mgbe ị hụrụ ihuenyo a gosipụtara n'okpuru, biko họrọ otu n'ime ebumnuche kacha kọwaa ngwaọrụ gị, ọ bụrụ na okwu gị adabaghị na nke ọ bụla, biko họrọ ndị ọzọ na- Pịa ma pịa pịa Osote bọtịnụ.
nzọụkwụ 4 Ihe omume a ga-ajụ maka ozi ngwaọrụ gị, biko họrọ aha ngwaọrụ na ụdị ngwaọrụ site na listi mpịakọta a. Tinye akà rà na obere igbe n’ihu Ekwenyere m na mwepuaka ahụ wee pịa gosi bọtịnụ.
nzọụkwụ 5 Soro ntuziaka na ihuenyo ịbanye Ọnọdụ Donwload dị ka akọwara na ihuenyo. Mbụ, gbanyụọ ekwentị site na iji bọtịnụ dị n'aka nri nke ekwentị gị; Nke abuo, pịa ma jide Mpịakọta nke ala, Home bọtịnụ na ike Bọtịnụ ekwentị gị ọnụ; Nke atọ, pịa Mpịakọta Elu Pịa bọtịnụ ekwentị gị, wee pịa Malite Pịa bọtịnụ na ihuenyo.
nzọụkwụ 6 Họrọ ọdịnaya ịchọrọ ịchọrọ ịghachite n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ site na ịpịakwa igbe ndị dị n'ihu ha. Ọ bụrụ na nke ahụ ọfụma ịchọrọ ị gbakee, chọta ihe ahụ Media ngalaba. Gosiputa ma họrọ onyonyo ịchọrọ ịghaghachite. Pịa Naghachi Pịa bọtịnụ dị na akuku aka nri na bọtịnụ iji chebe ha na kọmputa gị.
Enweghị ike iji foto dị ugbu a weghachite foto gị ma ọ bụrụ na ihe omume ahụ achọpụtaghị ekwentị gị. Ọ bụ ezie na etinyere ekwentị gị na kaadị SD mgbe ahụ ị nwere chi ebe ọ bụ na ị ka nwere ohere iji nwetaghachi kaadị na kaadị. yabụ, ka anyị gụọ ntuziaka dị n'okpuru ebe a ka anyị hụ otu ị ga - esi mee nke ahụ.
Etu ị ga-esi wepu Foto ndị dị na ekwentị na-agaghị agbanye na kaadị SD
nzọụkwụ 1 Wepụ sd kaadị, tinye ya na SD onye na-agụ kaadị SD na ikwunye onye na-agụ na kọmputa gị.
nzọụkwụ 2 Ibudata ma wụnye Data Iweghachite maka PC na kọmputa gị ma bido ya mechaa.
nzọụkwụ 3 họrọ Image ma lelee onye na-agụ gị na kọlụm Nke mbughari Wee pịa Doppler.
nzọụkwụ 4 Mgbe usoro nyocha ahụ zuru, nyochaa, ma họrọ foto gị iji gaghachi kọmputa gị.
Ọ nwere ike iwe iwe mgbe ekwentị nwụrụ, mana na sọftụwia a, inwere ike weghachite nke ahụ na nkeji ole na ole na-enweghị chipping data ahụ iberibe. Otu ezigbo ndụmọdụ, biko ndabere data mgbe nile, ka izere ụdị ọnọdụ a ghara ime. Alala azụ mee ka m mara ma inwere ajụjụ ndị ọzọ dabere na mgbe ị na-eji, enwere m obi ụtọ ịkekọrịta.
Idozi bọtịnụ gam akporo na-arụ ọrụ (Ike, olu, ụlọ, azụ na NchNhr)
Etu esi achọghachi foto site na Broken iPhone na nkeji nkeji 3
Etu esi enweta foto site n’aka Samsung Galaxy foonu
Etu esi achọta faịlụ site na kaadi SD SD gam akporo SD Card Data Recovery for Android
SanDisk SD Card Software Kachasị mma - Weghachite faịlụ furu efu na Ease
Nweta Foto si Samsung Broken Samsung
Wepụ Ihe osise na ekwentị agaghị agbanye